I-POLYESTER RUGS PROS AND CONS - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa I-Polyester Rugs Pros and Cons
Nasi isikhokelo sethu kwiipolyester zephepha kunye neengozi kuquka iintlobo ezahlukeneyo kunye nendlela yokucoca. I-Tacky ayijongi kwakhona, ipholiyesta yanamhlanje ixhaphake ngakumbi kunangaphambili, iyenza ifumaneke kuluhlu olubanzi lwezicelo. Kwaye enye yeemveliso ezisebenzisa ngokupheleleyo ubuchule bezinto ezibonakalayo zii-rugs zepolyester.
Ezi zigqubuthelo zomgangatho othambileyo kunye nokuhlala ixesha elide azisebenzi nje kuphela kodwa zikwanendawo ephantsi ngokumangalisayo xa kuthelekiswa namanye amalaphu afana nekotoni. Unokukhetha ipholiyesta erisayikilisweyo eyanciphisa isidingo semveliso yepolyester entsha.
IPolyester yimveliso elungileyo kwabo bafuna umbhoxo weengxoxo. Zibiza imali encinci kuneerugs ezenziwe ngeyiloni kunye nemicu yendalo.
Iinkonzo zePolyester Rugs
Yintoni i-100% yePolyester Rug?
Ngaba iiPolyester zerugs ziyityhefu?
Ngaba iirags zePolyester zikhuselekile?
Uyicoca njani irabha yePolyester?
Uyihlamba njani iRug yePolyester?
Nantsi imirhumo yepolyester kunye neengozi eziqala ngokulunga kuqala.
Umphezulu othambileyo wokuhamba . Ipeyinti yePolyester ihambisa esinye sezona sizathu siphambili sokuba sibeke iiragi kwindawo yethu yokuqala kwaye ibonelela ngentuthuzelo nokhuseleko. Lo mhlaba uthambileyo uxabiswa ngabantu kunye nezilwanyana ezifanayo.
Uhlobo oluchumileyo lwepolyester xa lwenziwe ngokufanelekileyo luya kuziva luthambe kakhulu kwiinyawo zakho xa kukho ityali. Ukuba ukhe waziva izinto ezikumgangatho ophezulu ze-microfiber ngaphambili, ke unoluvo lokuba la mava anjani ekhaya.
Nangona kunokubakho imiceli mngeni embalwa ekucoceni kuba iitshiphu zinokukhulisa intlawulo emileyo ngaphezulu kwezi zinto, ungaziphepha ngokucoca imitya. Abacoci abaziincutshe banokukunceda ugcine izinto zicocekile ngokuhamba kwexesha ngaphandle kobunzima.
Umbhoxo Ohlala ixesha elide . Ukuzinza yinto ipholiyesta ebesoloko isaziwa ngayo, kwaye ulindele ukonwabela umbhoxo wakho we-polyester malunga neminyaka emi-5 ukuya kweli-10, kodwa iya kwahluka ngokuxhomekeke kumgangatho kunye nokuhamba kweenyawo kwirug yakho.
Uluhlu olubanzi lokukhetha . Ukuguquguquka kwezinto zepolyester kuthetha ukuba unokufumana uluhlu olubanzi lokukhetha olunokuhambelana nezinto ozikhethayo.
Umzekelo, unokufumana iitawuzi zepolyester ezithambe kakhulu ezifanelekileyo kumagumbi okulala, amagumbi okuhlala kunye neeofisi.
nini ukunika izipho zomtshato
Akukho ukukhula kweBacteria - Iipolyester zePolyester ziya koma ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nezinye izinto zombhoxo ezenza ukhetho olukhethekileyo kumagumbi okuhlambela ekhitshini afumana ukufuma okuninzi kunye nokuchitheka kolwelo.
Ngaphandle kwento yokumisa ngokukhawuleza yeeroli zepolyester, kukho iimveliso ezinonyango olutsha olukhusela ukukhula kwe-microbial, ngaloo ndlela kulawulwa ivumba elingafunekiyo.
Umatshini wokuhlamba ulungele Iirugs ezinobungakanani obufanelekileyo zinokuhlanjwa ngomatshini ngaphandle kokonakalisa iintsinga.
Ukuphinda isebenze kwakhona -Ipolyester iitawuli zinokuphinda zisetyenziswe okanye zenziwe ngezinye iimveliso ezenziwe ngePET ezinje ngeebhotile zeplastiki. Irabha epholileyo eyenziwe ngerabha yenza iinxalenye zeemoto, ukugquma kunye nesofa.
Umbhoxo ongenakufikeleleka - Iipolyester zeeroli zifikeleleka ngakumbi kunenylon kunye nemicu yendalo kodwa zikumgangatho olungileyo. Ndwendwela ukophuka kwethu Nylon vs ikhaphethi yepolyester Apha.
Oku kwenza ukuba ezi rugs zikhethwe ngokufanelekileyo kumakhaya okuqalisa kunye nabantu abaqala ukubonelela ngamakhaya abo okuqala okanye ezindlini.
Ingagcinwa ziLwelo-based Liquids. Njengoko iipolyester zerugs zihlala zinganyangeki, amabala asekwe kwioyile yenye into.
Ungadinga ukufumana uncedo lobuchwephesha ekususeni la mabala anenkani okanye ufumane ipeyinti eyenziwe ngeplastikhi eyenziwe ngeprimiyamu enokumelana namabala amaninzi anokucocwa ngokulula.
Ngaba unokuthotywa phantsi kokuBonakaliswa kwe-UV rhoqo . Ukuchaphazeleka ngokuthe ngqo kunye nexesha elide elangeni kunokuphelisa umbala wombhoxo wakho wepholiyesta.
Inokuba Ngumthombo Wongcoliseko . Ngelixa iiroli zepolyester zinokuphinda zisetyenziswe kwaye zingenziwa kwiimveliso zePET eziphinda zenziwe zisebenze, i-microplastic ephalaza ii-microfibers inokuba ngumthombo wongcoliseko.
Kukho isidingo sokucoca rhoqo ngexesha lenkqubo yokuvelisa izinto ukuthintela le ngcaciso imfutshane yobutyobo beplastiki ekubeni bufike kumanzi namanzi.
Jonga le ndawo ipholiyesta yanamhlanje Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ileyibheli ene-100% ipholiyesta isithi umbhoxo wakho wenziwe ngokupheleleyo ngeplastiki. Qaphela nangona kunjalo, ukuba i-polyester eyi-100% inokwakha okungagungqiyo, ngakumbi xa uyibeka kwisomisi. Ukuthintela oku, unokongeza isithambisi selaphu xa uhlamba.
Bona iposti yethu malunga Iindidi zekhaphethi ezinye iindlela zepolyester.
Iingubo zepolyester yiplastiki eyenziwe ngeplastiki ye-PET okanye i-polyethylene terephthalate. Iiplastikhi ze-PET zinezinto ezingcolisayo eziyingozi ebantwini nakwimeko yendawo xa betywayo.
ivaliwe kwimibono yepatio
Nangona okwangoku, abukho ubungqina obubhaliweyo bokuba imicu yekhaphethi ye-PET ineziphumo eziyingozi kubasebenzisi bayo, kungcono ukugcina imicu ephuma emlonyeni nasempumlweni.
Ukucoca rhoqo kunye nokugcina ngokubanzi ubuncinci kube kanye ngeveki kuyacetyiswa ukuthintela uthuli kunye nezinto ezivela ekujikelezeni komoya wakho wangaphakathi.
Iirugs ezenziwe nge-polyester zikhuselekile ngokubanzi, kwaye xa kulandela okucetyiswayo ukucocwa rhoqo kwemicu kunye nolondolozo akunakuba sisongelo kubasebenzisi.
Fumana iimveliso ezihloniphekileyo zemigangatho yakho yeepolyester eziye zavavanywa ukufezekisa umgangatho womoya wasendlwini obekwe yiArhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo yase-U.S.
Ukucoca umbhoxo we-polyester yinkqubo ethe ngqo. Ukuhamba rhoqo kokucoca kuxhomekeke kubungakanani betrafikhi, indawo yombhoxo wakho, kunye nohlobo lombhoxo wepolyester onayo.
Ukucoca imihla ngemihla -Ukususa irabha yakho ukususa inkunkuma kunye nokuthintela amasuntswana ekuzinziseni kwimicu ye-polyester.
Ukucoca ngeveki - Vala omabini amacala ombhoxo wakho ukuze ukhulule ubumdaka kunye nenkunkuma. Unokucoca amatyeli ambalwa ngeveki ukugcina umbhoxo ucocekile, ngakumbi kwiindawo ezihamba abantu abaninzi.
Ukucoca indawo -Ukususa ukufuma okugqithileyo kunye nokufuma kuthintela ingqokelela yobumdaka kumbhoxo wakho. Kufuneka ucoceke rhoqo, ngakumbi kwiindawo ezixakekileyo ezinje ngeerugs ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlambela.
Kungcono kakhulu ukuba ubone okucocekileyo ngakumbi ukuba unenja yezilwanyana okanye ikati. Sula ngelaphu elifumileyo elifakwe kumxube wamanzi kunye nesepha kunokukunceda ucoce indawo leyo.
Ukucoca okunzulu -Galela amanzi kwitagi yakho ukuze uhlambe kwaye ukhulule ubumdaka obuqokelelweyo, emva koko udibanise isepha kunye namanzi aza kusetyenziswa kumatshini wakho wepolyester.
Kwibhakethi elinamanzi kunye nesepha, unokuqhubeka nokulahla inkunkuma ngokuvumela umbhoxo wakho ungene kumxube oxeliweyo kangangeeyure ezimbalwa okanye ubusuku bonke.
Emva koko, ungasebenzisa umbhobho wamanzi oxinzelelekileyo ukususa ukungcola okukhululweyo. Qiniseka ukuba uvavanya umxube wakho ngokuwusebenzisa kwinxalenye yombhoxo wakho ngaphambi kokuyifaka kwirug yonke.
Ukuhlamba oomatshini -Kukho iiragi zepolyester onokuzihlamba kumatshini qinisekisa ukubona ileyibhile yemiyalelo yento yokuhlamba into evunyelweyo kwaye ukuba kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe amanzi ashushu endaweni yoko.
Ezinye iindlela: Sebenzisa ishampu eyomileyo okanye i-steam ecocekileyo.
Jonga lo mbala we-polyester u-grey shag Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ukuhlamba i-rug shaggy kunokuba ngumceli mngeni omkhulu kuneeroli zepolyester ezineenwele ezimfutshane njengoko imicu inokubanjiswa.
Usenokusebenzisa iindlela ezifanayo ozisebenzisayo kumbhoxo weplesterisi oneenwele ezimfutshane kwitagi yakho yokugudla ingakumbi ukuba unayo ityali encinci yokucoca. Kwakhona jonga ukuba i-rug yakho e-shaggy iyatshiza ngomatshini.
Nangona kunjalo, uninzi lweerugg shaggy ezineerabha zokuxhasa iipleyiti zisenokungabinakho ukutsha ngomatshini, ke qiniseka ukujonga imiyalelo kunye neelebheli ngaphambi kokuhlamba ityali yakho. Sebenzisa ishampu eyomileyo kunye nokucoca umphunga zikwayindlela elula yokuyisebenzisa kwiiparester shaggy ezinkulu.
Ingcebiso eyongeziweyo. Xa ucoca ipholiyesta yakho enomdaka, khubaza ukubetha ibha kwindawo yakho kwaye usebenzise umsebenzi wokutsala kuphela.
Ucinga ntoni malunga nezi zinto zilungileyo kunye neengozi zerugs? Sazise ukuba ucinga ntoni malunga neepolyester zerugs kwizimvo. Tyelela eli nqaku ngolwazi oluthe kratya indlela yokukhetha ubungakanani bombhoxo .
Umama wegolide onxibe iilokhwe
Iivesi zebhayibhile zokomeleza umtshato
yintoni iringi yakho eqhubekayo